Xildhibaan Wakiillada Somaliland ka tirsan oo Guddoomiyaha Guddi uu ku jiro ku tilmaamay Mudane Cid kale Warbixin siiya | Berberanews.com
Home WARARKA Xildhibaan Wakiillada Somaliland ka tirsan oo Guddoomiyaha Guddi uu ku jiro ku tilmaamay Mudane Cid kale Warbixin siiya
adminDec 31, 2011WARARKA
Hargeysa-(Berberanews)- Xildhibaan Xariir Siciid Bullaale oo ka tirsan Gudidda Xanaanada Xoolaha iyo khayraadka Dabiiciga ah ee Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa naqdiyay eedo uu hore Guddoomiyaha Guddi hoosaadkooda Md. Siciid Maxamed Cilmi ugu jeediyey wasiirka macdanta iyo biyaha Xuseen Cabdi Ducaale inuu sifo sharci-darro ah dalka uga raray saddex Markab oo Macdan ah, isla markaana caddeeyey inaan Guddoomiyaha Guddi hoosaadkaasi ku metelin Guddidooda eedaha uu u jeediyay Wasiirka Macdanta iyo Biyaha.
Xildhibaan Xariir Siciid Bullaale oo daba socday eedo hore Guddoomiyaha Guddidoodu ugu jeediyey Wasiirka Macdanta iyo Biyaha Xuseen Cali Ducaale, ayaa shir Jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Hargeysa kaga hadlay jiritaanka arrimahaas. “Waxaan doonayaa inaan ka hadlo war ka soo baxay Guddoomiyaha Gudidda xanaanada xoolaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee Golaha Wakiiladda oo aniguna xubin ka ahay gudidaasi. Guddoomiyaha Gudidaasi wuxuu ka hadlay oo ku eedeeyay Wasiirka macdanta iyo biyaha inuu raray saddex markab oo macdan ah, isla markaana weydiiyey heshiiskii uu la galay Ha’yado caalami ah iyadoo aanu jirin baatrool aynu leenahay oo la tixraaci karaaba, isagoo ku hadlaya afka Gudida.” Ayuu yidhi Xildhibaan Xariir. Waxaanu intaa raaciyey, “Guddoomiyaha Guddidaasi eedaha uu u jeediyay Wasiirka Macdanta ee uu yidhi; ‘lacag buu lunsaday iyo Macdan buu raray ee ku hadlayay magaca Guddida wax allaale iyo wax ka jiraa ma jiro, waxaan leeyahay afka uu ku hadlay ma aha afkii Guddida, Guddida Xannaanada Xoolaha iyo Khayraadka dabiiciga ah ma jirto wax colaad ah oo ka dhaxaysa Wasiirka Macdanta iyo Biyaha ma jirto. Heshiisyada uu galo Wasiirkuna annagu umana tagi karno mana weydiin karno oo ma odhan karno heshiiskii aad la gashay Hay’addaasi ama waddankaasi keen, waayo? Shaqo aannu ku leenahay ma jirto. Wasiirku heshiiska uu galo wuxuu u gudbiyaa Golaha Wasiirrada cidda kaliya ee aannu xaq u leenahay inaannu weydiinnaa waa Madaxweynaha. Wasiirka talo iyo wax isku sheeg mooyaane’ wax kale oo naga dhaxeeyaa ma jirto.”
Xildhibaan Xariir Bulaale oo ka hadlaya sababta marka horumar loo dhaqaaqaba loo hordhigayo caqabado dalka, waxa uu yidhi, “Waxaan leeyahay Guddoomiyaha Guddi hoosaadkayaga waa markii labaad ee iyadoo horumarin loo sameynayo deegaannada aan ka tirsan-nahay uu geliyo khal-khal. Xiligii Xukuumaddii hore wuxuu eedahan oo kale u jeediyay Wasiirkii Macdanta iyo Biyaha immikana wuu ku celiyay, waxaan isleeyahay waxa uu Guddoomiyahagu hadalkan u yidhi wuxuu warbixin siinayaa cid kale..”ayuu yidhi.
Xildhibaan Xariir waxuu ugu baaqay Gudoomiyahooda in haduu khaladaad arko waajib tahay inuu soo hordhigo fadhi guddidu u dhan tahay, oo marka lagu qanco go’aan guddi lagu soo saaro, ugana digay inuu mar kale ku kaco talaabadaa oo kale hadaanu meel kale ku xidhnayn, “Waxaan leeyahay Guddoomiyahayagu ha ka waantoobo khaladaadka iska daba tagaya, warbixinaha uu bixinayana waanu haynaa, oo cid buu wakiil u yahay sidaan anigu qabo. Guddoomiyahayagu wuxuu xaq u leeyahay haddii uu khalad arkay inuu Guddidii inta uu u yeedho tuso khaladaadkii. Markaa iyadoo Gudidii u dhan tahay aanu tallaaabo ka qaadno,”ayuu yidhi Xildhibaan Xariir Siciid Bulaalle.
Previous PostUrur-goboleedka IGAD oo daboolka ka qaaday taageerooyin uu Somaliland u fidin doono Next PostWefti Masar iyo Kenya socdaallo ku soo maray oo dalka ku soo laabtay kana hadlay natiijada safarkooda